သတင်း - J.able Bio Saliva Collection Kit
တံတွေးစုဆောင်းသူကို တံတွေးနမူနာ၊ တံတွေးစုဆောင်းကိရိယာ၊ DNA တံတွေးစုဆောင်းပြွန်ဟုလည်း ခေါ်သည်။
တံတွေးသည် အမျိုးမျိုးသော ပရိုတင်းများသာမက DNA၊ RNA၊ ဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့် အဏုဇီဝပိုးမွှားအမျိုးမျိုးပါ၀င်သည့် ရှုပ်ထွေးသောအရောအနှောတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရ သွေးအတွင်းရှိ ပရိုတင်း အစိတ်အပိုင်း အမျိုးမျိုးကို တံတွေးတွင်ပါရှိပြီး တံတွေးသည် သွေးအတွင်းရှိ ပရိုတင်း အမျိုးမျိုး၏ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုများကို ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည် ။ ထို့ကြောင့် တံတွေးကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ရောဂါများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တိုးတက်မှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ လူများသည် ထိုးဖောက်မဝင်သော၊ ရိုးရှင်းပြီး လျင်မြန်သော စစ်ဆေးမှုနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများ လိုအပ်သော ဆေးစစ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ သွေးရည်ကြည်နမူနာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တံတွေးစုဆောင်းခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး အဆင်ပြေသည်၊ ထိုးဖောက်မဝင်ဘဲ၊ သွေးမှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ပြန့်ပွားနိုင်ခြေမရှိဘဲ လူနာများထံ နာကျင်မှုမရှိ၊ လက်ခံရလွယ်ကူပါသည်။ ဆီးနမူနာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တံတွေးသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ နမူနာယူခြင်း၏ အားသာချက်ဖြစ်သည်။ တံတွေးထောက်လှမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနသည် ကြီးစွာသောစိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွခဲ့ပြီး အချို့သော ပဏာမရလဒ်များ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တံတွေးရှာဖွေခြင်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
တံတွေးစစ်ဆေးမှုကို လမ်းဘေးဘက်အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အဖိုးတန်ရောဂါရှာဖွေရေးအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ တံတွေးကို HIV၊ HBV ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ကိုကင်း၊ အရက်စမ်းသပ်မှု၊ မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဆေးဝါးများအတွက် အသုံးပြုထားသည်။
J.able တံတွေးစုဆောင်းမှုကိရိယာ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်-
တံတွေးစုဆောင်းခြင်းကိရိယာသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခု၊ နမူနာပြွန်တစ်ခုနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တို့ ပါဝင်သည်။ လမ်းကြောင်းသည် အဆိပ်မရှိသော တည်ငြိမ်သော ကြားခံသို့ တံတွေးကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။ တံတွေးစုဆောင်းသူ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှင်းလင်းသော ဘွဲ့လိုင်းများရှိသည်။ ၎င်းသည် နမူနာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှုအတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည်။
တံတွေးစုဆောင်းသူသည် ခံတွင်းမှလျှို့ဝှက်ထားသော တံတွေးနမူနာများကို စုဆောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး စုဆောင်းထားသောတံတွေးများကို တံတွေးထိန်းသိမ်းထားသောအရည်နှင့် အညီအမျှရောနှောကာ တံတွေးနမူနာရှိ DNA ၏ခိုင်မာမှုနှင့် အခန်းအပူချိန်တွင် ရေရှည်သိုလှောင်မှုတို့ကို အာမခံပါသည်။ နမူနာကိုထုတ်ယူပြီးနောက်၊ ၎င်းကိုလက်တွေ့ဗီတိုရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
1. တံတွေးစုဆောင်းသူထဲသို့ တံတွေး 2ml ကို ညင်သာစွာ ထွေးထုတ်ပါ။
2. ထိန်းသိမ်းထားသောအရည်ကို တံတွေးထဲသို့လောင်းပြီး အဖုံးကိုတင်းကျပ်ပါ။
3. တံတွေးနှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော အရည်များကို အညီအမျှ ရောနှောပြီး အပေါ်အောက် ပွတ်ပေးပါ။
4. စစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာပြွန်ကို ဇီဝလုံခြုံမှုအိတ်ထဲတွင် ထည့်ပါ။
5. လမ်းကြောင်းကို စွန့်ပစ်ပါ။
မှတ်ချက်- DNA သည် တံတွေးမှထုတ်ယူထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း တံတွေးတွင်ပါရှိသော ဖယ်ထုတ်ထားသောဆဲလ်များမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တံတွေးနမူနာများကို စုဆောင်းသည့်အခါ၊ မေးရိုးအပေါ်နှင့် အောက်မေးရိုးကို တတ်နိုင်သမျှ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခြစ်ထုတ်ပြီး ဖယ်ရှားထားသော ဆဲလ်အရေအတွက်ကို သေချာစေရန် လျှာကို အနည်းငယ်ခြစ်ရန် သင့်သွားများကို အသုံးပြုပေးပါ။ ထို့ကြောင့် နမူနာယူခြင်းမပြုမီ မစား၊သောက်၊ ဆေးလိပ် စသည်တို့ကို မပြုပါနှင့်။
တင်ချိန်- ဇွန် ၂၅-၂၀၂၁
Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Viral Transport Media Kit, Self Standing Centrifuge Tubes များ,